UJean-Michel Cousteau Resort, eFiji Manje Wamukela Abahambi Abaqala NgoDisemba 1
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba Ze-Fiji » UJean-Michel Cousteau Resort, eFiji Manje Wamukela Abahambi Abaqala NgoDisemba 1
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba Ze-Fiji • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • emihlanganweni • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
UJean-Michel Cousteau Resort, eFiji
UJean-Michel Cousteau Resort, eFiji, okuyindawo yokuqala yokunethezeka ye-eco-adventure eSouth Pacific, ukulungele ukwamukela izivakashi zayo zokuqala ngemuva kwezinyanga zivaliwe kubahambi bamazwe, ngenxa yalolu bhubhane.
Indawo yokungcebeleka okunethezeka eVanua Levu Island eSouth Pacific inikela ngezigemegeme kanye nokuhlangenwe nakho okukodwa.
Ukuvulwa okulindelekile kulandela izindaba zokuthi iFiji ilindele ukuvula kabusha abahambi bamazwe aphesheya (kubandakanya nabahambi abavela e-USA) kusukela ekuqaleni kukaNovemba.
Abasebenzi bezokungcebeleka bagonywe ngokuphelele, baqeqeshwe, futhi bazibophezele ukweqa izinga eliphakeme kakhulu lamazinga okuphepha kanye nokuthuthwa kwendle eCovid-19.
Ifakwe endaweni ekhethekile, eluhlaza eshisayo esiqhingini saseVanua Levu esibheke emanzini anokuthula eSavusavu Bay, Indawo kaJean-Michel Cousteau ukuphunyuka kohlobo olulodwa kwemibhangqwana, imindeni, nabahambi abanokuqonda abafuna ukuphumula, ukuzijabulisa, nokugcwaliswa kabusha okunethezeka ngemuva kwezinyanga zokuhlala eduze kwekhaya.
Ukuvulwa okulindelekile kulandela izindaba zokuthi iFiji ilindele ukuvula izivakashi zamazwe aphesheya (kufaka phakathi izihambi ezivela e-USA) kusukela ekuqaleni kukaNovemba no Qantas izoqala ukusebenza kusuka e-Australia ngoDisemba. Abavakashi abase-US bangabhuka ukubhuka ngokushayela (800) 246-3454 noma nge-imeyili [i-imeyili ivikelwe], futhi izivakashi ezifika zivela e-Australia zingabhuka ngokushayela (1300) 306-171 noma ngokuthumela i-imeyili [i-imeyili ivikelwe].
“Sijabule ukwamukela izivakashi zethu nababuyiseli bethu ku Indawo kaJean-Michel Cousteau, ”Kusho uBartholomew Simpson, oyiGeneral Manager kaJean-Michel Cousteau Resort, eFiji. “Asikwazi ukulinda ukubona injabulo ebusweni babo futhi sizwe ukuhleka njengoba babuye bavakashela isiqhingi sethu ukuzojabulela futhi bahlole izimangaliso zemvelo ezingakholeki zalapho siya khona eSouth Pacific. Ngalesi sikhathi esingakaze sibonwe emlandweni wethu, abasebenzi bethu bezokungcebeleka basebenze ngokungakhathali ukugcina ubuhle bempahla ngenkathi begcina ukuzibophezela kwethu emvelweni. Sikulungele ukuhlinzeka izivakashi zethu ngeholide elihle elingalibaleki. ”
Izivakashi ezibuyayo kanye nabafuna ukuzidela abasha bazoba nethuba lokulala e-Fijian bure eyiqiniso, bacwilise kwamanye amanzi amahle kunawo wonke emhlabeni, bazithokozise ngesikebhe futhi bahlole le ndawo nge-sea kayak, noma babalekele esiqhingini esizimele bepikinikini . Izivakashi zingavakashela futhi imihlume, ipulazi leparele, isigodi sangempela saseFiji, noma ukunyuka ngamahlathi emvula bese uthola impophoma efihliwe.
Izivakashi ezincane kunazo zonke zizokhungatheka ngokuvakashela iBula Club, iklabhu lezingane eliwina imiklomelo, lapho bezochitha khona izinsuku zabo behlola futhi befunda ngezwe elibazungezile ngemidlalo nangaphandle. Izingane ezineminyaka engu-5 nangaphansi zinikezwa umzanyana wazo uqobo isikhathi sokuhlala kwazo; futhi izingane ezineminyaka engama-6 kuya kwengu-12 zijoyina amaqembu amancane aholwa ngumngane.
Abasebenzi beJean-Michel Cousteau Resort bagonywe ngokuphelele, baqeqeshwe futhi bazibophezele ukweqa izinga eliphakeme kakhulu lamazinga okuphepha nokuthuthwa kwendle eCovid-19 ngenkathi behlinzeka ngemisebenzi yobungcweti nokwamukela amakhasimende. Abasebenzi bazobingelela izivakashi ngokumboza ubuso, futhi kwezinye izimo amagilavu, ngenkathi beqinisekisa ukuqhela kwezenhlalo nangokomzimba. Ngokwengeziwe, zonke izindawo ezithinta kakhulu zizohlanzwa futhi zihlanzwe kaningi.
Ngokwengeziwe, iTourism Fiji isanda kudala i- "Ukuzibophezela Kwe-Fiji, ”Uhlelo olunezivumelwano ezithuthukisiwe zokuphepha, ezempilo kanye nezenhlanzeko zomhlaba osanda kubhebhetheka njengoba izwe lilungiselela ukuvula imingcele kubahambi. Lolu hlelo, olwenzelwe ukusiza ekunciphiseni ukusabalala kwe-COVID-19, lwamukelwe izindawo zokungcebeleka ezingaphezu kweziyi-200 zalezi ziqhingi, izindawo zokuvakasha, izindawo zokudlela, izindawo ezikhangayo nokunye.
Izihambeli zingabhuka “ngokuthula kwengqondo” njengoba indawo yokuvakasha inikezela ngokuvumelana nezimo okwengeziwe futhi kube lula kukho konke ukubhuka okusha. Indawo yokuvakasha idale i- "Deposit Free Period" kuze kube yizinsuku ezingama-30 ngemuva kokuvulwa kabusha komngcele phakathi kweFiji nezwe ohlala kulo, imininingwane egcwele ingatholakala lapha.
Ngokubhuka kanye neminye imininingwane ngeJean-Michel Cousteau Resort, sicela uvakashele: fijiresort.com.
The ICanyon Group of Companies, ongumnikazi wendawo yokuvakasha, enendlunkulu eLarkspur, eCalifornia, yasungulwa ngoMeyi 2005. I-mantra yayo ukuthola nokuthuthukisa izindawo zokungcebeleka ezinophawu olusezingeni eliphakeme ezindaweni ezingafani nezindawo zokuhlala ezincane ezakha umqondo womphakathi ohambisanayo kodwa ohambisanayo kakhulu endaweni ngayinye. . Kusukela yakhiwa ngo-2005 iCanyon idale indawo enhle kakhulu yezindawo zokungcebeleka, ezindaweni ezisukela emanzini olwandle oluluhlaza aseFiji, kuya eziqongweni eziphakeme zaseYellowstone, kumakholoni abaculi aseSanta Fe, naseCanyons aseningizimu ye-Utah.
I-Reggae ivuliwe! IJamaica Tourism Safe naphezu kwesikhathi esisha sokubekwa ekhaya ...
IFiji iqhubekela phambili ekuvulweni kabusha kwezokuvakasha ngoDisemba 2021
I-Latin America i-Airbnb entsha ephezulu engu-12 Izintandokazi
Abantu baseMelika abacabangi ukuthi ubhadane olubi kakhulu ...
Ngubani uDonald Wright, i-VP entsha ye-Alaska Airlines?
Kuqubuka imibhikisho enodlame emgwaqweni eSydney nase ...
Kusayinwe Isivumelwano Sokuvakasha se-India ne-Germany
'Ilungelo Lakho Lokufa Kusuka ku-COVID-19' kumele ...